'Sanadkii 2016kii wuxuu ahaa kii ugu darnaa ee soo mara carruurta Suuriya' - BBC News Somali
Image caption Gabadh Suuriyaan ah oo ooyaysa iyadoo uu jirkeeda daboolay dhiig iyo boor
Carruurta Suuriya ayay soo gaaartay dhibaatadii ugu darnay sanadkii 2016ka iyadoo ay dhinteen kuwii ugu badnaa tan iyo intii uu socay dagaalka sokeeye, sida ay sheegtay hay'adda Unicef.
Ugu yaraan 652 carruur ah ayaa dhimatay, 255 ka mid ah carruurtaasina waxay geeriyoodeen iyaga oo ku jiray ama ag joogay iskuul.
Hay'addu waxay sheegtay in 20% ay sare u kacday dhimashada dhallaanka marka la fiiriyo kuwii dagaalada ku dhintay sanadkii ka sii horeeyay ee 2015kii.
Tirada dhimashadan ayaa ah kuwa sida rasmiga ah loo xaqiijiyay, taas oo ka dhigan in ay intan aad uga sii badnaan karaan.
Hay'adda Unicef waxaa kale oo ay rumaysan tahay in in kabadan 850 carruur ah loo qortay in ay dagaaalamaan.
Tiradan ayaana labo jibaar ku ah middii 2015kii, sida ay warbixintu sheegtay. Carruurta la qortay ayaa la geeyay jiidaha dagaalka ama qaarkood waxaa loo adeegsaday xaaladdo xun xun oo ay ka mid yihiin is qarxin amaba in ay ilaaliyaan xabsiyo.
Geert Cappelaere oo ah u qaybsanaha Unicef ee Bariga Dhexe iyo Waqooyiga Afrika oo ka hadlaya magaalada Homs ee dalka Suuriya ayaa sheegay in ay wax aan caadi ahayn tahay dhibaatadda carruurta soo gaartay.
Malaayiin carruur ah oo Suuriya ku ku sugan ayaa si joogto ah dagaalo bartanka ugu galay, noloshoodiina ay noqotay mid la dabo gadiyay.
Image caption Carruur lagu qiyaasay lix milyan ayay noloshoodu ku tiirsan tahay gargaar ka dib lix sano oo dagaal sokeeye socday.
Lix milyan oo carruur ah ayay hadda noloshoodu ku tiirsan tahay gargaar bani'adamnimo dagaalada sokeeyo awgood, kaas oo todobaadkan galaya sanadkii lixaad.
Dad lagu qiyaasay 2.3 milyan oo ruux ayaa isaga cararay dalka, balse dadka ay dhibaatada ugu daran haleeshay ayaa ah 2.8 milyan oo ku go'doonsan goobaha ay adagtahay in la gaaro, waxaa ka mid ah 280,000 oo ruux oo ku nool dhulka go'doonsan, sida ay sheegtay Unicef.
UNICEF oo ka dayrisay waxbarashada carruurta reer Suuriya ee Turkiga
Geert wuxuu intaas ku daray "in canug kaste uu noloshiisa u baqayo arrintaas oo saamayn xun ku leh caafimaadkiisa, bad qabkiisa iyo Mustaqbalkiisa.
Todobaadkii hore ayay hay'adda Save the Children ka digtay in ay suurto galtahay in in malaayiin carruur ah oo Suuriyaan ah ay la nool yihiin xannuuno dhanka maskaxda ah oo ay ka qaadeen kiimikooyin, hay'adduna waxay ka baqaysaa in arrintan ay noqoto mid joogto ku noqota carruurta haddii aan caawimaad dagdag la siinin.
Warbixintan ayaa lagu ogaaday in saddex meeloodoow labo ka mid ah carruurtaasi ay ku dhaawacmeen dagaalka, guryahooda la duqeeyay ama la dilay dadkii ay jeclaayeen.